Governor Iowa kim Reynolds akka jetetti manneen barumsa harkii 50 yoo barumsa qamaan barachuu akka | KWIT
By Fatiya Adam • Aug 4, 2020
Governor Iowa kim Reynolds akka jetetti manneen barumsa harkii 50 yoo barumsa qamaan barachuu akka banamu itti kennami laafisan ta’e, waggaa kana dhuma irrati akka himan akkaa baruumsa irra hafaan saan irra deebi’ani guutan jette.
Reynolds mani barumsa seera cabsu jira jette.
Seerra himtooni walgahii warra state waliin godhan irratti dubatanitti manni barumsaa jalqaba irrati barumsa karaa irrati karaa online barattan godhuu hin dandayu hanga bulchaan state hayyama labsii kenutti.
Governor Kim Reynolds akka jetteti dhuunfaadhan maatin barumsa kara online baratan filachuu nidanda’u, garuu hin hayyamamu ana guutuuti hin hayyamamu haga hayyama warra dame barumsaa irraa argatanitti.
Namni 7 haarawni sababa Covid-19 Iowa keessati du’uu gabaasan, waliigalatti namni haarawa qabame ammo 181 dha, akkaata gabaasa deparmaanti fayyaati.
Waliigalatti nama 886 due keessa namni qixxeen nama umrii 80 fi sanii oliiti, akkasumas long-term care facilities keessa kan jiranidha.
Seeraan fayyaa akaa himanitti Woodbury county keessati namni 9 harawa Covid-19 qabamuu himan, waliigalatti namni qabame 3,656 dha. Website coronavirus kan state akka mullisuti namni Woodbury County keessati namni du’e 51 aka due gabaase. Ogeessi manna fayyaa Siouxland akka jedhetti nama waliiga akka borgabaasan himan.
Dameen Manna fayyaa Dakota County akka gabaasetti namni 3 haarawa har’a qabamuu himan. kunis waliigalatti namni qabame kara 1,878 olguddate jira. Nebraska keessatti namni waliigalatti qabame 27,000 yoo tau waliigalatti kan du’emmoo 332 dha.
Warri seera Naanawwa Waterloo-keessati bakka dalaga Tyson irra deebi’ani qulqullina baaka dalagaa isaani deebi’ani laaluf hayyama gaafataa jirani.
Hojattooni kumaa ol Waterloo Tyson plant keessa kan hojjatan coronavirus qabamu himan akkasumas dua muraasas argame jira. Akaa qorataan kutaa himetii shakii tokko malee wantii warii seera qulqullina cabsaan waa balesaan hinjiruu jedhee hime.
Itti gaafatamtuun seera ta democraati akka jetteti waan badaa jiru kana warra seera federaalati akka irra deebiani waan kana laalan ergite. Sababaan isaas yeroo baaye virusichi kun kaampani Tyson kana keessati babalinna akka ummata walgahaa jiru waan dhageetef.
Haata’u malee , jajjabeesite himuu jirti warri Tyson akka dalaydoota fayyaa bayinan mindeessan fi akka kaampanin qorannoo virus dalaydoota isaatif amma amma godhu.
Ajajaan seera Tyson gaafiwan warri Siouxland puplic media gaafatan deebisufi dide ,gaafi kan akka dalaydoota isaani hagam akka dhukuba kanan qabame fi hagam akka due, kunis kaanpaani Dakota City keessa fi Storm lake keessa jiru.
Magaala Woodbury County keessati sababa Covid-19 namni due 50 gahuu himame
By Fatiya Adam • Aug 3, 2020
Magaala Woodbury County keessati sababa Covid-19 namni due 50 gahuu himame, akkaata gabaasa mana fayyaa Sioux land irraa. manna fayyaa akka gabaaseti namni lamaan haarawa due takka dubartii umriin 41-60 jirtu yoo ta’u tokko ammo dhiira umriin 61-80 jiruudha.
Haata’u male, website state kan corona virus nama tokko dabale namni waliigalatti Woodbury County keessati du’e 51 ta’uu gabaase.
By Fatiya Adam • Jul 27, 2020
By Fatiya Adam • Jul 24, 2020
Magaalan Sioux City harbaa dhuftuu irraa jalqabamee bakke mara keesati haguugi fuula godhatamu godhu hedan.
Torbaan kana, waajira abukaato Iowa kan walii galaa akka ummani seera magaala ufiitif state jalaa deemu seera baasan. Garuu hanga silaa Governor Kim Reynolds state guuttun akka seera kana jalatti bulu hin ajajne. akka har’a isiin jetteti bultii 30 maaf manneen fayyaa sababa COVID-19 emergency irraa akka kaahamu goote.
Kunis dalaaydotta magaala kan bakka tokko hojatanii kan walirraa fageenya eegu hin dandeenefis seera irra ni’oola.